Osimiri kacha mma iji mee "oke" (akụkụ 3) | Akụkọ Njem
Osimiri kacha mma iji mee "oke" (akụkụ 3)
Osimiri na Resorts | | Afrika, España, Islands, Venezuela
A maara osimiri ndị na-abịanụ maka ụdị ha na hedonism. Ihe okike ha, ya na amara ha dika paradisiacal mere ka ha buru ebe kachasi nma izu oke.
foto akwụ ụgwọ: cocolima
Na ọnọdụ nọmba # 15 anyị kwagara Beach nke Camps Bayna South Africa. Ọ ga-kwuru na ị ga-akpachara anya na South African osimiri na-eme topless. Enwere akụkọ banyere ọtụtụ ndị nledo na-ese foto nke ụmụ nwanyị na-amaghị ama na saịtị ndị gba ọtọ, ị ga-akpachara anya. Otú ọ dị, ndị Beach site na Camp Bay Ọ bụ ndị anyị họọrọ ka ọ dị nso na ebe a na - ekewaghị ekewa dịka ụlọ ezumike, ụlọ mmanya na ụlọ nri. Staynọ, anyị nwere ike ikwu na Hotellọ nkwari akụ Bay, a obere ma ọkaibe ebe na ị ga-n'anya n'ezie.
foto akwụ ụgwọ: Axel buhrmann
Nọmba osimiri # 14 bụ Beach na Bossa en Ibiza, España. Ọ bụ oke osimiri mara mma na nke kachasị ukwuu Ibiza. O nwere ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ ahịa ọgbara ọhụụ. Style na-ekwe nkwa. N'abalị, ndị ọzọ agaghị agwụ agwụ, n'akụkụ a nke agwaetiti ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta klọb kachasị mma.
foto Ebe E Si Nweta: Space Ritual
Na nọmba # 13 achọtara ya, dịkwa na España, na Beach nke Estepona. Nke a bụ otu n'ime saịtị kachasị mma na mkpokọta Costa nke anyanwụ ileta na enwerekwa ndị ọchịchị nudist ógbè ahụ. Ọhụrụ Plọ nkwari akụ Kempinski Ọ bụ ebe kacha mma ịnọ dina n’elu aja ma nwee anwụ.
foto akwụ ụgwọ: Rdoke
Ọnọdụ # 12 ka ndị bi na El Beach Mmirin'ime Agwaetiti Margaritana Venezuela. Ọdịmma ya mara mma nke ihe karịrị kilomita 3 nke ájá mara mma, nkwụ na ogwe osisi na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma paradaịs na ndepụta ahụ dum. Ndị ọbịa ya na-abụkarị ndị Europe na ndịda America, na ndị ọbịa North America ole na ole. Na Hlọ nkwari akụ Hesperia Ọ bụ ebe anyị na-atụ aro ka anyị gaa, ebe ọ bụ naanị ụlọ nkwari akụ nwere gọọlfụ golf-18.
foto akwụ ụgwọ: esemokwu
Na ọnọdụ # 11, Sydney, Australia, e guzobere dị ka otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa iji gbaghaa elu. N'ebe ọdịnala a jupụtara ebe niile, osimiri ya bụ ebe a na-ahụkarị tan tan tan. N'etiti osimiri niile nke Sydney, nke kacha pụta ihe ga-abụ Bondi Beach. Na ogologo nke ihe karịrị otu kilomita, osimiri a mara mma nke aja ọcha na mmiri na-acha anụnụ anụnụ bụ ebe kachasị mma iji nọrọ ụbọchị dum. Ọ nwere ihe niile dị ụtọ iji nwee ọ bothụ ma ehihie na abalị.
foto Ebe E Si Nweta: EdTarwinski
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnọgide na - amata ụsọ osimiri ndị ọzọ na ogo, ị nwere ike ịme ya Osimiri kacha mma maka oke (akụkụ 1), Osimiri kacha mma maka oke (akụkụ 2), Osimiri kacha mma maka oke (akụkụ 4) na Osimiri kacha mma maka oke (akụkụ 5)!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Osimiri kacha mma iji mee "oke" (akụkụ 3)